‘एनपीएलको निर्णय क्यानलाई घातक बन्न सक्छ’ - Khelpati
‘एनपीएलको निर्णय क्यानलाई घातक बन्न सक्छ’
शनिवार, मंसिर ६, २०७७ खेलपाटी संवाददाता
आमिर अख्तर ।
नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट विकासका लागि धेरैनै उत्साहीत बनाउने सोच हो । क्यानको यो सोच राम्रो हो । क्यानले गर्नुपर्ने पनि यही हो । अध्यक्षको रुपमा चतुरबहादुर चन्दको धेरै अगाडी देखिको नारा थियो, क्रिकेट संघले एनपीएल गराउँछ भन्ने । जसमा हामी सबै सहमत छौ । क्रिकेटको सरोकारवाला निकाय भएर एनपीएल गर्नुपर्छ भन्नेनै छ ।
अब ईपीएलको कुरा गर्दा एनपीएलसंग मेरो कुनै संलग्नता छैन । एपीएल क्रिकेट संघले गर्ने हो । आफ्नो मोडालिटी बनाएर गर्ने हो । ईपीएल तीन वर्षदेखि चलिरहेको छ । क्यान निलम्बन भएको अवस्थामा हामीले आफ्नो हिसावमा नेपाली क्रिकेटमा योगदान गर्यौ । धेरै अफ्ठयारो भएर क्रिकेट चलायौं । आईसीसीसंग अनुमती लिएर पनि फ्रेन्चाईज गर्यौ । त्यो बेला कुनैपनि क्रिकेट गतिविधि नभएपनि ईपीएलले त्यो योगदान गर्यो ।
आज नेपाल क्यानले एनपीएल गर्छु भनेको छ । हामी सबै खुसी छौँ ।
तर याद गर्नुपर्ने कुरा, मेरो समाचारमा सुने अनुसार भारतीय कम्पनीलाई आयोजनाको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव छ । एनपीएललाई सबै हिसाबले ‘आउट सोर्स’ गर्ने र त्यसमा मैले थप केही बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
आईपीएल हुन्छ, भारतीय क्रिकेट टिम राम्रो छ भनेर सबै भारतीय कम्पनी राम्रो भन्ने हुदैन । हामीले शंकाको दृष्टिकोणले पनि हेर्न पर्छ । आईपीएल संसारको सबैभन्दा स्थापित र प्रतिष्ठित लिग हो । तरपनि बिच–बिचमा फिक्सर र सट्टेबाज गर्ने मान्छेहरु पुगिरहेका हुन्छन् । खेलाडीहरुमाथि प्रस्ताव गरेको समाचार आईरहेको छ ।
जबकी भारतीय क्रिकेट बोर्डको धेरै बलियो ‘एन्टीकरप्सन’ छ । मलाई यतिमात्र शंका छ । धेरै भारतीय कम्पनीसँग संगत गरिरहेको हुन्छु । त्यसमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी ठगी धन्दा गर्ने, सबैको स्वार्थ सट्टेबाज गर्ने हो भन्नेनै पाउँछु ।
मलाई पनि ईपीएलमा धेरै प्रस्ताव आयो । बीचमा धेरै भारतीय कम्पनीले ईपीएल चलाउने प्रस्ताव गरे । फ्रेन्चाईज लिन्छौ भनेर प्रस्ताव गरे । तर मैले कहिल्यै पनि उनीहरुलाई पस्न दिएन । किन दिएन भने मलाई थाहा छ, सबैको स्वार्थ क्रिकेट विकासका लागि छैन । सबैलाई छोटो बाटोबाट पैसा चाहिन्छ, त्यो सट्टे पट्टा हो ।
आईसीसीको सदस्य भएपनि पनि क्यान व्यवस्थापकीय हिसावले एन्टिकरप्सनको हिसाबले धेरै सबल बनिसकेको छैन । आजको हाम्रो एन्टिकरप्सन, एन्टी डोपिङ, कोड अफ कन्डक्ट, स्वार्थ बाँझिने कुरा कुनैपनि व्यवस्थित भएको छैन । यसमा मेरो एउटा फरक मत भनेको क्रिकेट संघले एनपीएल गर्न दिईरहेको छ भने त्यसलाई पुरा प्रक्रिया बुझेर, छानविन गरेर, मात्र दिनुपर्छ । एकाएक प्रस्ताव आएर आयोजनाको अधिकार दिनु हुदैन । किनभने यो विदेशी कम्पनी हो । सबै कुरा बुझ्न पर्छ । भोलि विदेशी कम्पनीले यहाँ फिक्सिङ गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?
पैसा दिने धेरै ठुला कुरा हैन । तर बुझ्न पर्छ, यो पैसा सम्पती शुद्धिकरण भएर आएको हो कि विश्व आतंकवादबाट पैसा आएको हो कि ?
पैसा कहाँबाट आएको हो ? आखिर पैसा कमाएर क्यानलाई दिने हो । त्यसैले क्यानले एक औपचारिक प्रक्रिया राख्न पर्छ । कम्पनीको पृष्ठभूमी, कुनै लिग गरेको छ कि छैन ? कुनै अनुभव छ कि छैन ? भनेर विचार पुर्याउन पर्छ ।
दोस्रो, पैसा सम्पती शुद्धिकरण भएर आउन पर्ने हो । विश्व आतंकवादबाट पैसा आउन भएन, राष्ट्र बैंकको बाटो भएर आउन पर्यो । कर तिरेर आउन पर्ने हो । यदी टिमका मालिकहरु भारतीय छन् भने सबै मालिकको पृष्ठभूमी पनि आउन पर्छ ।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई)ले चलाउने आईपीएलमा कोही पनि साधारण मालिक छैनन् । कोही आम्बानी छन्, अर्को शाहरुख खान छन् । कोही जीएमआर छ । भारतमा सामाजिक प्रतिष्ठा कमाएका मान्छे र कम्पनीहरु आईपीएल चलाईरहेको छ । मैले ईपीएलमा किन ठुला उद्योगपतीलाई राखेको छु भने यिनीहरुलाई सामाजिक प्रतिष्ठा पनि ख्याल हुन्छ । तर पृष्ठभूमी नभएका मानिस र कम्पनीलाई टिम दिएको भए पहिलो संस्करणमै ईपीएल उधोगति तिर जान्थ्यो । मैले आफ्नो हिसाबले ‘एन्टीकरप्सन’ राख्छु । धेरै कुरा राख्छु । तर फ्रेन्चाइज लिगमा प्रतिष्ठाले अर्थ राख्छ ।
कुनैपनि नराम्रो, साधारण, फटाहा मालिकलाई फ्रेन्चाईजमा ल्याउनु हुदैन । त्यसैले क्यानले सबै प्रक्रिया र पृष्ठभूमी बुझ्न पर्यो । पैसा दियो भन्दैमा कम्पनी राम्रो हुन्छ भन्ने जरुरी हुदैन । सबै चम्किने कुरा सुन हुदैन भन्ने बुझ्न पर्छ ।
चार करोड २० लाख दियो भन्दैमा हतार गर्न हुदैन । सुरुमा त्यो कम्पनीको विषयमा जानकारी लिनुस । लिग गरेको अनुभव छ कि छैन भनेर बुझ्नु होस । मिडियाको प्रशारण अधिकार बेचेको छ कि छैन, मालिक कस्तो आउँछ, मालिकको पृष्ठभूमी के हो, कसले लगानी गर्ने, पैसा कहाँबाट आईरहेको छ, उसको पैसा आउने बाटो बुझ्न पर्यो ।
कतै विश्व आतंकवादको पैसा त हैन, कालोधन त हैन, छानविन गर्नपर्छ ।
यो क्रिकेट बोर्ड हो । कुनै सानो कुरा हैन । त्यसैले हामी सचेत हुन आवश्यक छ । एनपीएलको सोच धेरै राम्रो छ । यो धेरै उच्च स्तरको सोच हो । यो हुनपर्छ । तर क्यानले सही कदम चाल्न आवश्यक छ । यदी भारतीय कम्पनीलाई दिने हो भने विचार पुर्याउनुपर्छ । सबै भारतीय कम्पनी राम्रो हुदैनन् । किनकी संसारमा सबै भन्दा धेरै क्रिकेटमा सट्टा पट्टा हुने भनेको भारत हो । हामी सचेत हुन आवश्यक छ ।
भर्खरै क्यान आईसीसीबाट निलम्बन फुकुवा भएर आएको छ । त्यसले गर्दा क्यानले कुनै जोखिम कदम नचालोस, जसले गर्दा पुन नेपाली क्रिकेट ५–१० वर्ष पछाडी धकेलियोस् । त्यसैले धेरै भन्दा धेरै सचेत हुन आवश्यक छ । कुनै नराम्रो मान्छे आएको खण्डमा, नराम्रो सोच आएको खण्डमा नेपाली क्रिकेट पुन निलम्बनमा जान सक्छ । हाम्रा सबै घरेलु फ्रेन्चाईज बवार्द हुन्छ । नेपाली क्रिकेटका सबै उपलब्धि गुम्छ ।
क्यान पहिलो पटक देश बाहिरको कम्पनीसंग काम गर्न खोज्दैछ । क्यानसंग समेत अनुभव छैन, बाहिरको कम्पनीसंग समेत अनुभव छैन । एउटा पनि लिग नचलाएको कम्पनी छ । अब कम्पनीका कसको हो ? खेलाडीको पृष्ठभूमी हो कि ? व्यापारिक घराना हो कि ? खुलेको छैन ।
म भन्न चाहन्छु, एनपीएल राम्रो कदम हो । राम्रो सोच हो । क्यान धेरै सचेत हुन आवश्यक छ । एनपीएलको आधिकारिकता दिने विषयमा धेरै विचार पुर्याउन आवश्यक छ ।
क्यान भर्खरै लिनम्बनबाट आएको छ । क्यानले त्यस्तो कदम नलियोस, जसले नेपाली क्रिकेटलाई पुन धक्का हान्न सक्छ । अब हामीसंग निलम्बन ब्यहोर्ने धेरै शक्ति छैन ।
क्यानलाई मैले जोखिम लिएर काम नगर्नुस भनेर सल्लाह दिन चाहन्छु । क्यानमा कुनै त्यस्तो जनशक्ति छैन, जसले कुरा बुझोस । जसले यो कुरालाई छानविन गर्न सकोस ।
क्यानको जोखिममा नपरोस । क्यान सामाजिक संस्था हो, जसले क्रिकेट विकासको काम गर्छ । भोलि यहाँ सट्टा पट्टा, फिक्सिङ्ग नहोस । यो निर्णय भोलि घातक हुन सक्छ ।
एनपीएल विदेशी कम्पनीले लिदैमा नेपालमा रहेका कुनै फ्रेन्चाईजलाई प्रतियोगितालाई फरक पार्दैन । तर क्यानले गल्ती गरेको खण्डमा हामी सबैले भोग्न पर्छ । सन् २०१५ मा क्यान निलम्बन हुदाँ हामी सबैले यसको असर भोग्यौ ।
क्यानलाई दिने भनेको रकम सानो रकम हैन । वर्षको ४ करोड २० लाख रुपैयाँ भनेको धेरै ठुलो पैसा हो । अहिले ठुलो पैसा लोभ्याएर दिएर फिक्सिङ्ग र सट्टा पट्टाको बाटो नखुलोस भन्नेमा हामी सचेत हुन पर्छ ।
यदी क्यानले स्थानीय व्यवस्थापन लिन चाहेको खण्डमा म पनि सधै इच्छुक छु । मेरो लागि यो ठुलो कुरा हुदैन । मसंग ज्ञान, अनुभव र सम्पर्क छ । दिमाग र क्षमता छ । मलाई प्रस्ताव आएको खण्डमा म पनि तयार छु । तर दुर्भाग्य नेपालमा तीनवटा फ्रेन्चाईज चलिरहेको छ, क्यानले बाहिर गएर काम गर्न खोजेको छ ।
(एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल)का सञ्चालक आमिर अख्तरसँगको कुराकानीका आधारमा)
इंग्ल्यान्डलाई टी-ट्वान्टी सिरिज
पवन विश्व नेत्रहीन क्रिकेटको कोषाध्यक्षमा निर्वाचित
अष्ट्रेलियालाई भारतविरुद्धको एकदिवसीय सिरिज
स्मिथको शतकमा भारतलाई ३९० रनको लक्ष्य
न्युजिल्याण्डलाई टी-ट्वान्टी सिरिज
मनोज कटवाल क्रिकेट टिमको सहायक प्रशिक्षक
चेल्सी र टोटेनहमको बराबरी
मिलानलाई ५ अंकको अग्रता
काभानी चम्किदा युनाईटेडको उत्कृष्ट जित
क्रिकेट टिमको न्युट्रिशियनमा ज्ञानेन्द्र नियुक्त